बो थ्रस्टर्स, ब्लगिंग, र संचार | Martech Zone
बिहीबार, मे 17, 2007 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
युएस नेवीमा हुँदा, संचारको एक विधि जुन आज्ञापित थियो त्यो प्राप्त सन्देशको मान्यता हो र पुष्टिकरणको साथ retort हो। इलेक्ट्रीशियनको रूपमा, मेरो एउटा काम बो थ्रस्टर नियन्त्रण खडा थियो। एउटा बो थ्रस्टर मूलतः सुरु aको बीचमा प्रोपेलर थियो जुन जहाजको एक छेउबाट अर्को धनुषमा लाग्यो। यो एक इलेक्ट्रिक मोटर हो जुन बो थ्रोस्टर चालू थियो र यसले वास्तवमा यसको आफ्नै जेनरेटरलाई अनलाइन हुनको लागि आवाश्यक रहेको टोक़को मात्राका कारण यसको संचालनमा लाग्यो।
म ट्याank्की ल्याण्डि Sh शिप (LST-११ 1192)) मा थिए जुन वास्तवमा समुद्री तटमा दौडिनको लागि डिजाइन गरिएको थियो र मरीन ट्याks्की र सवारी साधनहरूको अफलोड गर्न विशाल र्याम प्रक्षेपण गर्न डिजाइन गरिएको थियो। बो थ्रोस्टरले जहाजको धनु (अगाडि) को स्थानको पूर्ण नियन्त्रणलाई अनुमति दियो। क्याप्टेनले यसको प्रयोग गर्‍यो, मुख्य इञ्जिनहरूका साथ, जहाजलाई सावधानीपूर्वक नेभिगेट गर्न। पुलमा, त्यहाँ थुप्रै व्यक्तिहरू जहाजको स्थान, इन्जिन नियन्त्रणहरू, स्टियरेज, आदि ट्र्याक गर्दैछन र क्याप्टेनले एउटा सावधानीपूर्वक 'ब्याले' मा सबैलाई सन्तुलित गर्दछ बिस्तारै एक विशाल जहाज, सयौं फिट लम्बाइ, वरिपरि सार्न। यसको गन्तव्यमा बाधा।
क्याप्टेन पूर्ण रूपले सचेत छ भनेर निश्चित गर्न, उसले प्रश्न सोध्नेछ वा आदेश छाल दिन्छ। प्रश्न सोध्नुको साथसाथै नाविकको जवाफ हुन्छ जसलाई प्रश्नको निर्देशन थियो र त्यसपछि क्याप्टेनले त्यो उत्तर दोहोर्याउँथे। एक नाविक अर्डर गर्दा, नाविक क्रम दोहोर्याउँथे र अर्डर कार्यान्वयन गर्थे। एक पटक पूर्ण भएपछि, नाविकले कार्य सम्पन्न भएको बताउँदछ र क्याप्टेनले यसलाई दोहोर्याउँदछ र यसलाई स्वीकार गर्दछ। यी सबै शिप लगमा पनि लेखिएको थियो।
एक नमूना कुराकानी हुन सक्छ:
क्याप्टेन: "बो थ्रस्टर, एक पाँचौं पावर स्टारबोर्ड।"
नाविक जो धनु थ्रस्टरमा छ, घुमाउनुहोस् दायाँ तिरको पाँचौं हिस्सा घुमाउनुहोस्।
बो थ्रस्टर: "बो थ्रस्टर, एक पाँचौं पावर स्टारबोर्ड, आइए।"
मलाई भर्खर दाहिने पट्टि पाँचौं भाग दायाँ घुम्न भनियो। बुझे!
बो थ्रस्टर अपरेटर घुँडा एक पाँचौं पावर स्टारबोर्डमा बदल्छ।
बो थ्रस्टर: "क्याप्टेन, बो थ्रुस्टर एक पाँचौं पावर स्टारबोर्ड हो।"
मैले क्याप्टनमा भनें कि मैले घुम्ने बाटोको पाँचौं हिस्सा दाहिनेतिर मोड्यो।
क्याप्टेन: "बो थ्रस्टर एक पाँचौं पावर स्टारबोर्ड हो, आइए।"
मैले तपाईंलाई सुने! तपाईंले भन्नुभयो यो एक पाँचौं स्टारबोर्ड हो।
राम्रो कम्प्लेक्स केवल एक घुम्टो बदल्न, सही? तर त्यस घुँडा घुमाउँदा घटनाहरूको एक टन हुन सक्दछ ... जेनेरेटरबाट विशाल मात्रामा एम्पेरेज, जुन डिजेल इञ्जिन तल तान्ने छ, जसलाई स्विचबोर्ड इलेक्ट्रीशियनले देखेका थिए कि कुनै पनि घटना घट्न नसक्ने कुरामा पक्का छ, एक ईञ्जिनम्यानले डिजेल अवलोकन गर्दैछन् र यसको ईन्धन र तेलको खपतको खपत, एक प्रमुख ईन्जिनियरले हेराई गरेका थिए कि सम्पूर्ण शक्ति र डीजल प्लान्टहरू अवलोकन गर्छन्। नौसेना बुझ्दछन् कि संचार कुञ्जी हो, त्यसैले सन्देश दोहोर्‍याउने र सन्देश पुष्टि गर्ने प्रक्रियाले उक्त सन्देशमा सूचनाको कुनै क्षति नभएको कुरा निश्चित गर्दछ।
अर्डर अनुसरण गर्दै
पोर्टो रिकोमा एक पटक, जुनियर अफिसर हेल्ममा थिए र बो थ्रस्टरको सर्तलाई स्वीकार गर्न असफल भए। नाविक (मलाई) ले उनलाई दोहोर्‍यायो कि धनु थ्रस्टर संलग्न छ र एक तिहाई शक्तिमा, धनुषलाई डकमा चलाउँदै। मैले वास्तवमै बो थ्रेस्टरलाई समर्थन गर्न शुरू गरें (यो वास्तवमा आदेशहरूको उल्ल .्घन हो) दोहोर्याउने क्रममा (सचेत पिचमा) यो संलग्न भएको थियो। Boom। जहाज डकबाट ब्याक गर्दै थियो र धनु हामीसँग डकको एक टन घिसार्‍यो। भाग्यवस, यो प्राय: काठ मात्र हो तर यसले अझै पनि सयौं हजारौं डलर क्षति पुर्‍यायो। सबै किनभने एक नेता आफ्नो अधीनस्थ सुनेनन् ... जो उसलाई भनेको थियो के गर्दै थियो। अफिसरलाई संक्षेपमा ब्रिजबाट खारेज गरियो र फेरि जहाजलाई पाइलट गर्न अनुमति दिइन।
म यु एस नेवीका लागि ठूलो सम्मान गर्दछु। हामीले आपतकालिन नन स्टपलाई ड्रिल गरेका छौं जुन कहिले पनि यस्तो भएको थिएन कि हामीले डरको सट्टा सहज ज्ञानबाट कार्य गरेका छौं। हामीले नन-स्टप पनि सूचित गर्‍यौं। ती व्यक्तिहरू जुन सेवामा कहिल्यै आएका थिएनन् उनीहरू सोच्न सक्दछन् कि यस तरिकाको संचार व्यर्थ हो ... होईन। जब म काममा हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौतिहरू हेर्छु, ती issues issues% मुद्दाहरूको सञ्चारसँग गर्नुपर्दछ, वास्तविक उत्पादन वा सेवा होइन जुन हामीले सेवा गरिरहेका छौं। यु एस नेवीले स्तर, जिम्मेवारी, प्रक्रिया र सञ्चारको विधिहरू स्थापना गरेको छ। म विश्वास गर्दछु यी गुणहरू सफल व्यवसायहरूमा पनि पाइन्छन्।
ब्लगिंगसँग यी सबै के गर्नुपर्दछ?
र ... सायद उनीहरू ब्लगि inमा पनि फेला पर्नेछन्! यदि मैले अर्को ब्लगसँग कुराकानी गरेँ भने, त्यो ब्लगले ट्र्याकब्याक पाउँदछ, र त्यो ब्लगर अब फिर्ता आउँदछ र मेरो ब्लगमा पढेर टिप्पणी गर्दछ। (र यसको विपरित) सन्देश पठाइएको छ ... दोहोरिएको ... र स्वीकार गरियो। सायद यसैले नै ब्लगिging त्यस्तो अविश्वसनीय उपकरण हो र अन्तर्निहित टेक्नोलोजीहरू मुख्यधारा मिडिया र निगमहरूले उपभोग गर्न थाल्छन्। मलाई थाहा छ कि मैले पढेको छु जोनाथन श्वार्ट्जको ब्लग र विश्वास गर्नुहोस् कि उनले भनेका छन् कि यसले केवल आफ्नो सन्देश संसारमा पुग्न मद्दत गर्दछ - तर यसले सूर्यको कर्मचारीहरुलाई पनि सन्देश दिन्छ।
म कुनै पनि हिसाबले यसो भनिरहेको छैन कि कम्पनीहरूले चलाउनु पर्छ जस्तो क्याप्टेनले जहाज चलाउँछ। युएस नेवीले नाफा कमाउन वा पैसा बचत गर्नुपर्दैन। अमेरिकी नौसेनाको एक मात्र लक्ष्य खतराको लागि तयार हुनु छ जुन हुन सक्छ वा हुन सक्दैन।
र सफलतापूर्वक कम्पनीहरू चल्दै
म आश्चर्य गर्छु; जहाँसम्म, तिनीहरू कसरी सफल कम्पनाहरू हुन्छन् जब तिनीहरूसँग अधिकार, रैंक, र जिम्मेवारीको स्पष्ट लाइनहरू छन्। मलाई अचम्म लाग्छ हाम्रो कार्यहरू कत्ति सजिलो हुनेछ यदि दिशा स्पष्ट रूपमा सञ्चार गरिएको, स्वीकार गरिएको, र दोहोर्याइएको थियो। म आश्चर्यचकित गर्दछु कि कति नेताहरू अधिक सफल हुनेछ यदि तिनीहरूले ती आदेशहरू कार्यान्वयन गरे पछि तिनीहरूका मातहतहरू सुने।
म विश्वस्त छु कि कम कम्पनीहरूले 'चलाउनु' समस्याहरू यदि उनीहरूले गरे भने।
यो पोष्ट वास्तवमा काममा असभ्य हप्ताबाट प्रेरित थियो। हाम्रो विकास व्यक्तिहरू यस हप्ता हाम्रो अनुप्रयोगमा कार्यान्वयन गरियो र केहि शानदार सुविधाहरू जारी गर्‍यो। उत्पादन प्रबन्धकको रूपमा, मेरो काम भनेको "विडंबनाका साथ" एक "युद्ध कोठा" मा हेर्दै थियो, संचार गर्दै र प्राथमिकता दिँदै मुद्दाहरू जुन हाम्रो ग्राहकहरूबाट उत्पन्न हुनसक्दछ। "युद्ध कोठा" मा days दिन पछि, म इमान्दारीपूर्वक भन्न सक्छु कि - हामीसँग केहि बग भए पनि - मुख्य मुद्दाहरू थिए सबै सञ्चार मा ब्रेकडाउनहरू।
सर्वश्रेष्ठ नोट मैले कहिल्यै पनि मेरो ब्लगमा प्राप्त गरेको छु
मई 18, 2007 मा 1: 52 PM
डग, म यति टाढासम्म जान्छु कि हाम्रो समाजमा मानिसहरु संचार चाहिन्छ। हामी यस्तो हलचल र हलचल संसारमा बाँचिरहेका छौं जुन कुराकानीले पीडित छ, र हामी मानिस भएकोले हाम्रो जीवनमा सञ्चारको आवश्यकता पर्दछ। व्यापार मा सफल हुनका लागि मात्र होइन, तर खुशी हुनु पनि सफल हुनु हो। मानिसहरु एक अर्का संग कुराकानी गर्न बनेको थियो।
हामी सबै व्यक्तिगत र व्यावसायिक रूपमा राम्रो गर्छौं यदि हामी सँधै सन्देश स्पष्ट रूपमा संचार गर्न को लागी खोजी गर्छौं, हामीले सन्देश स्पष्ट रूपमा पाएका छौं प्रमाणित गर्छौं र भनिएको संचारको रसीद पुष्टि गर्दछौं। यो धेरैको लागि समयको बर्बादी जस्तो लाग्न सक्छ, तर म त्यो सडक फिक्सिंग मिक्सअपहरू भन्दा अगाडि बर्बाद गर्दछु जुन बी / सी सन्देश थिएन (a) स्पष्ट रूपमा बताइएको थिएन, (ख) राम्रोसँग प्राप्त भयो वा (c) दुबै "राम्रो महसुस गर्नुहोस्" सामान बाहेक, यसले ध्वनि व्यवसायको लागि पनि राम्रो बनाउँदछ। राम्रो पोस्ट!
मई 18, 2007 मा 2: 08 PM
हामीसँग आज एउटा बुक क्लब बैठक थियो र धेरै जसो कुराकानी केन्द्रित थियो ... सबै चीजहरूको सञ्चार। मलाई लाग्छ कि यदि हाम्रा सबै समस्याहरू वास्तवमै कम सञ्चारबाट आएको हो। र हामी निश्चित रूपमा 'होईन' संचारको दुःखलाग्दो परिणामहरू देख्छौं, जुन भर्जिनिया टेक किलर जस्ता राक्षसहरूले विकास गर्दछन्।
सञ्चारका लागि धन्यवाद, जुल्स! तपाईंको मेरो नयाँ ब्लग-साथी!
नोभेम्बर २०, २००। 27::2007 अपराह्न
तिमीलाई थाहा छ यो प्रविष्टिले मलाई टाइटैनिकको सम्झना गराउँदछ, हैन? :)) धेरै चाखलाग्दो .. यो जे भए पनि केहि विशेष छ।